Kikoriki lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Round sy ny biby kely mampihomehy no nanorim-ponenana tao amin'ny sokajy Smeshariki lalao an-tserasera. Kids Misokatra ho maimaim-poana, mamela anao hilalao amin'ny rehetra ny mahery fo ny tantara. Mbetika izy, mihazakazaka trondro-up, afa-mandositra ny mpitsabo mpanampy, manao kilalaon-tsaina, manidina amin'ny Hang glider, dia nitaingina milina, dondony baolina. Azonao atao mihitsy aza mamorona ny Smeshariki ka tonga amin'ny ny anarany, ary nandoko sary sy milalao tenifototra. Dia mamolavola sy tantara ho an'ny ankizy tsara izay tia ny biby mahafatifaty ary vonona ny hanohy fifanakalozan-kevitra miaraka aminy ho eny amin'ny tontolo virtoaly. Rehefa dinihina tokoa, dia ny lehibe ny hihaona indray cronies!
Lalao Smeshariki tamin'ny Category:
Fandokoana Books for Boys
Manomboka amin'ny lavitra
Racing amin'ny skateboards
Ny tsara indrindra Kikoriki lalao
Losyash sy lolo
Nyusha amin'ny trampoline
Racing amin'ny Smeshariki
Pin mahazo fanosotra
Dimy ambin'ny folo ny Smeshariki
Nyusha sy ny snowball
Create ny Smeshariki
Anaty rano fiaran-dalamby
Brosayka amin'ny Smeshariki
Smeshariki: Online fandokoana
Croche sy sokina hanangona fanomezana
Box amin'ny kilalao
Boloky hazo sokina
Smeshariki: Lalao Volley Forest
Smeshariki: Puzzles 2
Puzzles amin'ny Smeshariki
Barash manangona fehezam-boninkazo
Teny ao amin'ny cirque Smeshariki
Smeshariki lalao - tena mampihomehy sy namana tsara manodidina traikefa nahafinaritra
Lalao Online Rehetra Kikoriki lalao
fanabeazana ny lalao Smeshariki
ny ankizy dia tena mandinika sy liana mijery olon-dehibe manao ny zavatra rehetra, ka ny manaraka hanahaka ny fitondran-tenany. Jereo fa mahafinaritra foana, fa koa ny fotoana mba handinika ny fitondran-tenany. Rehefa dinihina tokoa, ny fanabeazana ny tanora - fa tsy ny toriteny sy ny fanaratsiana, ary ohatra manokana. Ohatra iray ny ankizy dia ny boky sy ny tantara an-tsary, angano, ary na dia amin'izao fotoana izao, ary ny lalao video. Manohy ny ho nikasika, nefa tsy taitra, raha mahatratra ny zazalahy kely izany filalaovana ny solosaina totozy ary mitarika azy io amin'ny pejy ny lalao toerana natokana ho ny tsara. Mba hahatonga azy ireo ho mamokatra fialam-boly, ny mpandraharaha no nikarakara ny famoronana kilalao ho an'ny isan-taona, ary na dia ny tanora indrindra Gamers tsy hitoetra amin'ny asa.
Namakivaky ny tontolo virtoaly, ankizy mahita fivelarana vaovao, ny fianarana mba hieritreritra sy handray fanapahan-kevitra, mamaly ny zava-misy, mba hanao asa mampiasa ny lojika. Ankoatra izany, izy ireo Manamafy ny foto-kevitra ny namana, tsy mivadika, herim-po, herim-po, ny voninahitra, ny fianakaviana, reciprocity. Smeshariki lalao noforonin'ny ny eponymous sariitatra, izay niseho voalohany tao amin'ny fahitalavitra tamin'ny 2005 ary niaraka tamin'izay dia raiki-pitia zaza. Ny biby rehetra any mijery baolina boribory, ary dia ekipa namana. Ny olon-drehetra dia manana ny toetra, toe-po sy ny fahalalana, dia foana mizara amin'ny namana.
Ao amin'ny solosaina dikan-ny tantara no miverimberina. Tsy ara-bakiteny, fa dia eo amin'ny lalana, ary amin'ny lalana marina. Ary ny zava-misy fa ireo ankizy dia afaka izao tenany ho anisan'ny mahafinaritra ny fianakaviana, manao ireo vokatra ho azy ireo dia manintona kokoa. Ankoatra izany, lalao rehetra Smeshariki malalaka aseho eo amin'ny toerana, ary ny ray aman-dreny ihany no afaka manomboka misy kilalao ary hanampy ny zanakao mba hahafehy ny fomba fitantanana ary mifehy ny fotoana lany amin'ny efijery ny solosaina.
zanakao ho afa-po
Taorian'ny fitsidihana ny sakafo, tranonkala pejy, dia hahita mahafinaritra maro niainany izay tsy voly ny zaza, fa mahasoa maro koa ny mampianatra sy ny zava-dehibe. Dia ny anankiray teo amin'ny andron'ny mpifankatia bitrodia Croche nijery ny lanitra ka nahita azy nitsinkafona ao am-pon'ny. Efa ela te hiaiky ny fihetseham-pony, ary nanapa-kevitra fa Nyusha izany no fotoana tonga lafatra. Dia nandefa Mpanosika sofiny ka nanaisotra. Ary tonga any milalao, mitarika ary manampy azy hirodana manangona ny bunch ny fo. Indray mandeha koa, dia nitodika tany Barash manontany an-tsaha ny nofiny karaoty. Ny olon-drehetra dia fantany fa tsara Barash afaka hanatanteraka baiko toy izany, ary izy dia sambatra sy nahatsapa izany faniriana izany. Fa ny zavatra - dia tsy mieritreritra ny fomba Croche mahazo amin'ny torimasony sy ho eo an-tsaha ny karaoty. Angamba afaka manampy azy?
Lalao Smeshariki-tserasera mavitrika foana sady feno ankizy manokana hatsikana, hatsaram-panahy sy ny hery tsara. Ankizy fotsiny tia ny:
Toy izany koa ny fitiavana hanao, sy Smeshariki. Koa nahoana no tsy ekipa ka mbetika miara-? Mifidiana toetra izay mahaliana no mitantana ny hilalao misambotra-maso niaraka tamin'ny sisa tamin'ny mponina ao amin'ny firenena pelaka. Rehetra nandositra, ary mila hahatratra namana mba handresy ny lalao.
koa isika Smeshariki lalao ho an'ny tovovavy. Piggy Nyusha stylish ny rehetra indrindra ny orinasa amim-pifaliana. Tiany ho fizahan-toetra ny akanjo sy ny fahadiovana mivantana tao an-trano, ary ny zazavavy dia ho afaka hanampy azy hanao izany. Ary ny olona rehetra mahalala fomba ny ankizivavy tia fanomezana. Raha vao Croche sokina, ary nanapa-kevitra ny hanao ny tsy nampoizina ho namany - Nyusha sy Sovunya. Fanomezam-pahasoavana latsaka fotsiny avy eny amin'ny lanitra, ary izy ireo mba hisambotra azy ireo. Mbola manana be dia be ny lohahevitra hafa mahafinaritra sy mampihomehy tantara sy ny ankizy milalao Smeshariki lalao rehetra ho maimaim-poana. Izany no fanomezana mahafatifaty koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny be fiahiana.